कोभिड विरुद्धको खोप, सातै प्रदेशमा - योहोखबर
१४ माघ २०७७,बुधवार
काठमाडौँ – भारत सरकारले अनुदानमा दिएको कोभिड विरुद्धको खोप यति बेला नेपालको सातै प्रदेशमा पुर्याइएको छ । प्रदेश १ का लागि ९६ हजार खोप सोमबार विराटनगर पुगेको छ । विराटनगरस्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा राखिएको खोप १४ वटै जिल्लामा मंगलबारसम्म पु¥याइसक्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार पहिलो चरणमा ३५ हजार ५ सय ७६ जनालाई खोप लगाउने तयारी गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा ७१ हजार १ सय ५२ खोप आवश्यक स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ  । प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले बुधबार ८ वटै जिल्लाका सदरमुकामस्थित अस्पतालबाट खोप अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशभर ९ वटा बुथ राखेर खोप दिइने योजना छ पहिलो चरणमा ३३ हजार ६ सय स्वास्थ्यकर्मी र १ हजार २ सय ४ सरसफाइकर्मीलाई खोप लगाइनेछ ।
प्रदेश १ का लागि ६ हजार खोप सोमबार विराटनगर पुगेको छ । विराटनगरस्थित प्रदेशमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रमा राखिएको खोप १४ वटै जिल्लामा मंगलबारसम्म पु¥याइसक्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।त्यसैगरी, प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवःथापन समितिको बैठकले बुधबार ८ वटै जिल्लाका सदरमुका स्थित अस्पतालबाट खोप अभियान सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । भने एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा १९ देखि २० जनासम्म स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिनेछ ।
वाग्मती प्रदेशभर ६६ हजार ४ सय ८१ जनालाई पहिलो डोजको खोप लगाइनेछ .
संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको ७ हजार ६ सय भाइल खोप वाग्मतीको हेटौंडा पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हेटौंडा–१ मा रहेको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा खोप भण्डारण गरिएको छ ।‘प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एकैपटक खोप लगाउने तयारी छ ।
एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा १० देखि २० जनासम्म स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनेछ । वाग्मती प्रदेशभर ६६ हजार ४ सय ८१ जनालाई पहिलो डोजको खोप लगाइनेछ ।
कोरोनाले थप तीनजनाको मृत्यु, २८३ जनामा संक्रमण पुष्टि
दाहाल–नेपाल पक्षको १० सिट पनि आउँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
विभागिय टिम एपीएफ प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश
छन्देले किन ल्याए दुइटी श्रीमती ? दुई स्वास्नीको पोइ, कुना पसी रोइ (भिडियोसहित)